Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Dean Henderson Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Dean Henderson Biography nke na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ndị nne na nna, Ezinaụlọ, Enyi nwanyị / Nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ, Net Worth na Ndụ Nke Onwe.
Na nkenke, nke a bụ Life Life nke Deano, onye England na-eche nche. Lifebogger malitere site na nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ọdịmma gị na-enye gị nsogbu, lee oge ọ bụ nwata ruo na nnukwu ụlọ akwụkwọ - nchịkọta zuru oke nke Dean Henderson's Bio.
Dean Henderson Oge Mbido na Nnukwu.
Ee, onye ọ bụla maara banyere mbili ọsọ ọsọ ya oge oge 2019/2020, njirimara nke merela ka ọ bụrụ onye kachasị asọmpi maka Jordan Pickford si Ndị otu egwuregwu bọọlụ England. Ọzọ, onye na-ama ya aka David de Gea's Ebe nchekwa bọọlụ Manchester United.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole hụrụ egwuregwu bọọlụ n'anya tụlere ịgụ akwụkwọ Dean Henderson nke anyị kwadebere na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, hapụ ka ịmalite.
Dean Henderson Storymụaka Akụkọ:
Malite na aha ya bụ “Dian Bradley Henderson“. Dean Henderson mụrụ na 12th nke March 1997 na obodo Whitehaven, United Kingdom. A mụrụ onye na-eche nche na England na-eto eto dị ka nwa nke abụọ na nwa nye nne na nna ya.
Dean Henderson jiri oge ọ bụ nwata na-eto eto na ụmụnne ya; otu okenye aha ya bụ Calum na nwata aha ya bụ Kyle Henderson.
N'okpuru ebe a bụ foto mara mma nke ụmụ nwoke Dean Henderson n'oge ha bụ nwata.
Zute Brothersmụnna Dean Henderson- Callum Henderson (n'isi isi aka nri) na Kyle Henderson (n'etiti) n'oge ha bụ ụmụaka.
Dean Henderson's Nzụlite Ezinụlọ na Nmalite:
N'adịghị ka ndị egwuregwu ugbu a na ndị ochie na ndị nne na nna bara ọgaranya bụ; Frank Lampard, Gerard Pique, Mario Balotelli na Hugo Lloris, anyị onwe anyị Henderson a zụlitere na nnukwu ụlọ bara ọgaranya.
Eziokwu bụ, nne na nna Dean Henderson dị ka ọtụtụ ndị nọ na obere obodo Whitehaven bụ ndị na-arụ ọrụ, na-ebi ndụ dị ka afọ na enweghị mgbe ọ bụla ọgụ nke monies.
Ezinụlọ Dean Henderson si na Whitehaven. Nke a bụ obodo ọdụ ụgbọ mmiri dị n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ nke Cumbria, na nso Lake District National Park dị na England North West. Whitehaven bụ ọdụ ụgbọ mmiri bụ isi, nke rụpụtara nnukwu aha maka azụmaahịa rum nke UK.
Nke a bụ Whitehaven- ebe ezinụlọ Dean Henderson si.
Ọzọ you maara?… George Washington (onyembụ onye-ishi ndu Amọnu) agbụrụ ezinụlọ jikọtara ya na Whitehaven.
Ee! Obodo ọdụ ụgbọ mmiri bụ nne nne nne ya Nwagbara Ga (1671–1701) onye biri ebe ahụ ma lie ya n’ụlọ ụka St Nicholas nke obodo ahụ.
Dean Henderson Mmụta na Ọrụ Buildup:
Mgbe ọ dị afọ 5, Dean malitere agụmakwụkwọ mbụ ya na Whitehaven. Dịka nwata akwụkwọ, ọ hụrụ egwuregwu n'anya n'anya egwuregwu BỤGHỊ football na mbụ.
Dean Henderson maara nke ọma na cricket, ihe ngosi nke hụrụ ya ka ọ ghọrọ nwatakịrị na onye na-echekwa wicket.
Site n'inwe agụụ na-agụsi ike ịmatakwu, obere Dean malitere ikere òkè na mmemme football. Na njedebe, ịhụnanya ya maka Football meriri Cricket.
Ndị nne na nna Dean Henderson, bụ ndị na-akwado Manchester United malitere nwa ha nwoke iji kwado ụlọ ọrụ ahụ.
N'oge ahụ, ịhụnanya maka United mere ka ọ na-eyi United kit kwa ụbọchị, ụbọchị. Dị ka a hụrụ n'okpuru, kit ahụ yiri nke eyi n'oge Eric Cantona.
Anyị na-amalite site n'igosi gị otu n'ime oge mbụ Dean Henderson bụ nwata.
Dean Henderson Biography - Ndụ Ndụ Mmalite:
Little Dean maara na ya nwere nkà ma nwee ike ịme ihe site na football. Site na afọ 3 mgbe ọ malitere ịkwado United, onye mgbaru ọsọ England n'ọdịnihu ga-amalite na-arụ ọrụ ndụ ya niile, na -rọ nrọ banyere igwu egwu na Premier League. Na mbido, o tinyere nrọ ya n'ọrụ.
Mgbe ọ dị afọ 8 n'afọ 2005, obere Dean kpọrọ Carlisle United kpọrọ ka ọ bịa maka ule agụmakwụkwọ nke ọ gafere na agba.
Ndị nne na nna Dean Henderson na-ahọrọ ụlọ ịgba egwu n'ihi na ọ bụ ụlọ kacha mma kacha mma (ihe dị ka nkeji 55) n'ụlọ ha.
Ị maara?… Little Henderson (eserese n'okpuru) bido ibido ịgba bọl dịka onye na-egwu egwuregwu dịpụrụ adịpụ, mana mechara banye na onye mgbaru ọsọ tupu afọ iri na ụma ya.
Dean Henderson- Afọ ndị mbụ na Carlisle United.
Mkpa ọ dị ịnwa ule na agụmakwụkwọ ka ukwuu bịara ka ọ na-eru nso dị afọ iri na ụma. Ọụ nke ndị nne na nna na Dean Henderson na ndị òtù ezinụlọ amaghị oke n'oge ọ (afọ 14) gafere ule agụmakwụkwọ nke Manchester United.
Dean Henderson Bio - Roadzọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Mgbe ọ nọrọ afọ isii na Carlisle United, Henderson kpebiri ịkwaga kilomita 135 ọzọ na Manchester ebe ọ malitere ndụ ọhụrụ na agụmakwụkwọ United.
Na United, ụgbọala na mkpebi siri ike Dean Henderson bụ akụ ya kacha baa uru. Dị ka ya nọgidere na-eto eto, ọ hụrụ onwe ya ka ya na thelọ akwụkwọ na-ebi ndụ nke ọma ma nwee ọganiihu dị nwayọ site na otu ọgbọ United.
Ị maara?… Dean Henderson so na ndị ahọpụtara maka Jimmy Murphy 2014–15 Nwa agbọghọ ọkpụkpọ nke Afọ nturu ugo ma nke ha meriri Axel Tuanzebe- onye siri ike nke etiti. Na August 2015, Henderson bịanyere aka na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya na ụlọ ọrụ ahụ.
Dịka onye isi mgbaru ọsọ, ọ zutere asọmpi siri ike. N'oge ahụ, United nwere ndị ọrụ mgbaru ọsọ 5 bụ ya bụ; David De Gea, Joel Pereira, Sam Johnstone, Sergio Romero na akụkọ mgbe ochie Victor Valdes. O siiri Dean ike ịkọwa ha n'ụzọ dị mfe. Iji nwee ọganihu, o kpebiri ịchọta ebe ịta nri ọhụrụ na mbinye ego.
Dean Henderson Biography - Bilie na-ewu ewu Akụkọ nke:
Kama rumkpochapu mgbe inara ego, onye mgbaru ọsọ Ingland na-eto eto siri ike gaa n’ike ebe ọ na-akwụ ụgwọ ya site na njem Stockport County, Grimsby na Shrewsbury Town. Mgbe ọ nọ na Shrewsbury Town, Dean ghọrọ onye na-akwado ofufe dị ka o nyeere ha aka imeri ọtụtụ egwuregwu.
Ka nọ na-achọ ohere na United, Dean Henderson hụrụ David De Gea ị ka ga-anọ n’isi ike ya.
O kpebiri ịga n'ihu na ego mgbazinye ego ebe ọ na-adaghị mbà na United. Ọbụna mgbe bịanye aka na nkwekọrịta nkwekọrịta afọ abụọ na United, ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi United kpebiri iwere nhọrọ mgbazinye ego na Akwa United.
Mgbe ọ nọ na Sheffield United n'okpuru Chris Wilder, Dean Henderson nwere ike na-eche na ya Premier League akara aka na-akpọ ya. Eziokwu bụ na ọ bụghị naanị nyere aka Ọganihu Sheffield nwetara na Premier League na nke mbụ kemgbe 2007.
Dean gara n'ihu merie klọb Young Player of the Year Award, yana Championship Golden Glove.
Onye na-echekwa bekee na-ebido n'ike merie Championship Golden Glove.
N'oge a na-ede akụkọ ndụ Dean Henderson, onye na-eche nche na-eto eto bụzi onye na-eche nche nke Premier League site na ọtụtụ egwuregwu.
A na-akpọ ya onye nọchiri anya ya David de Gea onye United na-atụle ire ere iji wụnye ya dị ka nhọrọ mbụ.
More ka, a nnọchi na- Jordan Pickford dị ka England Mba 1 ma ụdị Henderson enweghị ike ịpụtakwu na ọ nwere ike dochie Pickford dị ka nọmba England ọzọ 1.
Oge 2019-2020 hụrụ ka akpọrọ ya dịka otu n'ime ndị nche kacha mma na England na ụwa.
N’enweghị mgbagha, enwere ohere ọ bụla Henderson ga-apụta dị ka onye na-agbaru ọsọ karịa De Gea na Pickford n'egbughị oge. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ọnye na-bụ Dean Henderson's Nwa nwanyi ?:
Site na ịrị elu ya na ịbụ onye a ma ama na Premier League, o doro anya na ụfọdụ ndị na-achọ ịmata ihe ga-achọ ịmata onye enyi nwanyị Dean Henderson bụ. Karịa ma onye na-eche nche mara mma ọ lụrụ di na nwunye nke na-egosi inwe nwunye.
Eziokwu bụ, n'azụ ihe mgbaru ọsọ na-aga nke ọma ma mara mma, enwere enyi nwanyị mara mma nke aha ya bụ nke ekpughere onye amapụtara na foto dị n'okpuru.
Zute Di Nwanyị Dean Henderson.
Dean Henderson na enyi ya nwanyị malitere mmekọrịta chiri anya na ntọala siri ike, nke na-agbanahụ nyocha nke anya ọha.
Birda ịhụnanya - ndị na-enweghị nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwanyị (n'alụghị di) - mere mmekọrịta ha n'ihu ọha na November 2019.
Dika edere n'okpuru, otu n’ime uzo di na nwunye kachasi nma maka oge ezumike bu agwaetiti Spanish na mmiri nke Ibiza n’etiti ebe ndi ozo mara nma nke Europe. N'okpuru ebe a bụ Dean na-enweghị egbu egbu n'akụkụ ezigbo enyi ya nwanyị ma ọ bụ WAG.
Dean Henderson na enyi ya nwanyị na-agba ụgbọ mmiri.
Hụrụ Dean Henderson hụrụ n'anya ka ọ na-ede foto a nke ya na enyi nwanyị ya kwupụtara n'ihu ọha n'okwu ya;
“Anyị na-ebi ezigbo ndụ anyị”
Na-ekpe ikpe site na ụzọ abụọ ahụ lovebirds si ewere mmekọrịta ha, o doro anya na ịgba alụkwaghịm na agbamakwụkwọ nwere ike ịbụ nzọụkwụ ọzọ.
Tomata ụdị onye na-egbochi English ahụ ga-enyere gị aka ị nweta nkọwa ka mma banyere ọdụ ya.
Ọnye na-bụ Dean Henderson?… Na-amalite, ọ bụ onye nwere nghọta na mgbe ọ na-arọ nrọ banyere ọchịchọ ya.
Dean sitere n'ike mmụọ nsọ na ọ dịghị mkpa ịkwụsịtụ nrọ ya. Ọ dị njikere ịgafe ókèala iji hụ ya dị ka nke kachasị mma ọ bụrụla.
Dean Henderson na-ebi ndụ ahaziri ahazi n'obodo Sheffield, ndụ enweghị mmefu na-enweghị isi n'agbanyeghị ụgwọ ọnwa £ 25k ya, ọnụ ahịa ya ruru £ 500,000 na ọnụ ahịa ahịa £ 18.00m.
Eziokwu bụ, Dean Henderson bụ ụdị ndị ịgba ọsọ ụkwụ na-ejide mkpa ndị bara uru na-adịghị efu nnukwu ego.
N'oge ederede, ọ dịghị ihe dịka igosipụta ụgbọ ala ndị mara mma, nnukwu ụlọ obibi na ihe ndị ọzọ nke ndị na-agba ụkwụ na-ebi ndụ na-enwu enwu.
N'ebe na-adịghị anya, Dean Henderson ga-achọ itinye ego ya na enyi nwanyị ya.
Onye na-eche nche na-ebili ngwa ngwa anaghị ebi ndụ na-enwu ọkụ n'oge edere.
Dean Henderson Ndụ Ezinụlọ:
Ihe kacha mkpa na ndụ bụ “Family"Na"n'anya“. Ndị ezinụlọ Dean Henderson chere na ha nwere ihe niile mgbe ha nwere ibe ha n'akụkụ.
N'ebe a, ha na-ese onyinyo inwe nnukwu ezinụlọ n'oge Zest Harboride, Ebe ndị Britain a ma ama n'oge a ma ama dị na Whitehaven, United Kingdom.
Dean Henderson Ndụ Ezinụlọ. N'ebe a, a na-ese ya ya na mama ya, papa ya na ụmụnne ya.
N'akụkụ a mara mma, anyị ga-ewetara gị ọtụtụ eziokwu banyere nne na nna Dean Henderson na ndị ezinụlọ ya ndị ọzọ.
Banyere nna Dean Henderson:
Okporo ụzọ nke kpakpando agaraghị adaba dị ka ọ na-enweghị enyemaka nke nna ya.
Onye na-eche nche England anaghị ada ada Ememe Father'sbọchị Nna iji cheta nna ya nke ọ na-azọrọ na ọ bụ onye na-akwado ya. Foto dị n'okpuru bụ nna Dean Henderson na nwanne ya nwoke nke okenye (Calum).
Zute Dean Henderson papa ya na nwanne ya nwoke nke okenye (Calum) sere onyinyo.
Banyere Dean HendersonMama m:
Malite, ọ dị afọ 52 n'oge edere (Eprel 1, 2020). Nne Dean Henderson bụ maka nwa ya nwoke omume ọma na ma na mpụga, ihe omume emetụtala echiche ya na ndụ. Ihe osise dị n'okpuru ebe a bụ nne Dean nke dị obere karịa afọ ya.
Zute Dean Henderson's Mum- Ọ bụ na ọ naghị ele obere karịa afọ ya?
Aha ndị nne na nna Dean Henderson amaghi n'oge edere.
Banyere Dean Hendersonsmụnna:
Onye mgbaru ọsọ Bekee na-ebili enweghị ụmụnne nwanyị mana ụmụnne abụọ; onye okenye nke na-aza aha Calum na nke ntà, Kyle. N'adịghị ka Calum, Kyle Henderson na-ebi ndụ nkeonwe.
N'ikwu ya, Calum dị ogologo karịa Dean onye na-atụle 6 ′ (ụkwụ) 2 ″ (sentimita asatọ) n'ịdị elu. Peepu na akaụntụ Calum Henderson na Instagram na-ekpughe eziokwu ahụ na ọ lụrụ di na nwunye na ihe omume ntụrụndụ ya nwere ike ịbụ golf na skating.
Banyere Dean HendersonNdị ikwu:
Obi abụọ adịghị ya, nwanne nna ya (nwanne), nne na nna ya (na nne na nna ya) ma ọ bụrụ na ha dị ndụ) ga-erite uru dị n'inwe nke ha onwe ha na isi okwu nke egwuregwu bekee.
Dị ka n'oge ederede, enweghị akwụkwọ dị na weebụ gbasara ha. N'ezie, anyị ga-emelite gị mgbe anyị hụrụ ihe.
Dean Henderson Eziokwu Banyere:
N'akụkụ ikpeazụ nke Dean Henderson's biography, anyị ga-ewetara gị ụfọdụ eziokwu.
Eziokwu nke 1: Ọ bụ Onye njide ụwa:
Dean Henderson bụ Guinness World Record Holder. Ị maara?… Ọ na-ejide Guinness World Record maka 'Oge kachasị ngwa iji ejiji dị ka onye na-eche nche' nke o mere maka 49.51 sekọnd. Ọ kwụsịghị ebe ahụ.
Dean na-ejidekwa Guinness World Record maka 'Kasị football (bọọlụ) na-agafe agafe' nke o mere na otu nkeji. Ihe ndekọ ndị a bụ akụkụ dị mkpa nke akụkọ ndụ Dean Henderson.
Eziokwu nke 2: Salahapụ ịkwụsị ụgwọ ọnwa:
Kemgbe ọ malitere ịmalite ime ka ndị mmadụ mara ya, ụfọdụ ndị na-achọ ịmata ihe amalitela ịtụgharị uche n'ihe Dean Henderson kwuru, dịka ego ole ọ rụpụtara mgbe ọ malitere ọrụ ya na Sheffield United.
Na 18th nke June 2018, Dean Henderson kesara nkwekọrịta na Sheffield United, otu nke hụrụ ya na-etinye ego na-akwụ ụgwọ gburugburu £ 520,000 kwa afọ. Akingghapu ụgwọ ọrụ ya (stats 2018) n'ọnụ ọgụgụ pere mpe, anyị nwere ndị a;
Nzụta ya na Pound Sterling (£)
Ngota ya na USD ($)
Ihe ọ na-akpata kwa afọ £ 520,000 $ 625,604 € 570,168
Ihe ọ na-akpata kwa ọnwa £ 43,333 $ 52,133.68 € 47,513
Ihe ọ na-akpata kwa izu £ 10,833 $ 13,033.4 € 11,878
Ihe ọ na-akpata kwa ụbọchị £ 1,547.6 $ 1,861.92 € 1,696.9
Ihe ọ na-akpata kwa elekere £ 64.49 $ 77.58 € 70.7
Ihe ọ na - akpata kwa nkeji £ 1.08 $ 1.29 € 1.18
Ihe ọ na-akpata Kwa Sekọnd £ 0.02 $ 0.02 € 0.02
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Dean Henderson'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Ị maara?… Nwoke n’afọ n’afọ whongland na-enweta ihe ha niile £ 2,340 otu ọnwa ga - arụ ọrụ ma ọ dịkarịa ala 1.5 afọ irite £ 43,333 nke bụ ego Dean Henderson nwetara n’otu ọnwa.
Eziokwu nke 3: Okpukpe Dean Henderson:
Aha "Dean" bụ aha nwata nwoke bụ Onye Kraịst ọ bụkwa aha Bekee bekee nwere ọtụtụ nkọwa.
Ruo n'ókè a, ọ dị mma ịkọ na Dean HendersonO yikarịrị ka nne na nna zụlitere nwa ha nwoke dịka nkwenkwe okpukpe Ndị Kraịst. Ọ bụ ezie na okwukwe Henderson n'okwu banyere okwukwe dị ala ọ bụrụgodi na nsogbu anyị na-akwado ya ịbụ Onye Kraịst.
Eziokwu nke 4: Ọ na - ejide United Record:
O meela ihe karịrị afọ iri anọ ka Manchester United nwee ike iwepụta onwe ha onye mgbaru ọsọ sitere na mahadum ha.
You maara?… Dean Henderson ugbu a na-edekọ ndekọ nke ịbụ onye mbụ na onye ọkacha mmasị na-eche nche n'ụlọ mgbe Garry Bailey na 1978.
Nyere ya, Manchester United na nke mbụ n'ime afọ iri anọ achọghị itinye aka na ahịa mbufe na-achọ ndị na-achọ ihe mgbaru ọsọ dịka ha mere n'oge gara aga.
Eziokwu nke 5: Nhọrọ Ndị E Nyeere Maka Ndị Na-ahụ Maka Egwuregwu FIFA:
Ọ bụrụ na ị bụ nwanyị hụrụ ọrụ ọrụ FIFA n'anya, biko mee nke ọma ịzụta Dean Henderson. Ya na ya so Gianluigi Donnarumma nwere ikike nke ịbụ otu n'ime ndị egwuregwu kacha mma na FIFA.
Onye na-eche nche na bekee bụ nwoke maka ọdịnihu. Ebe E Si Nweta: SoFIFA
N'ezie # 6: Ndi Dean Henderson na Jordan Henderson Brothers:
Mgbe Dean Henderson rịgoro na Premier League, ụfọdụ ndị egwu abanyela na ịntanetị ịjụ ma ọ metụtara onye isi Liverpool, Jordan Henderson.
Eziokwu bụ, Dean na Jordan Henderson enweghị njikọ ọ bụla ọbụlagodi na ha nwere aha nna yiri ya.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Dean Henderson Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography.
Dean Henderson Biography (Enyocha Enyocha Wiki)
Aha n'uju: Dian Bradley Henderson.
Ụbọchị ọmụmụ: 12 Machị 1997 (afọ 23 dị ka Eprel 2020).
Ndị nne na nna: Mr na Mrs Henderson.
Homelọ Ezinaụlọ: Whitehaven, England.
Ụmụnne: Calum Henderson (nwanne nwoke nke okenye) na Kyle Henderson (nwanne nwoke nke obere).
elu: 6 ft 2 na (1.88 m).
Agụmakwụkwọ Bọọlụ: Carlisle United (2005–2011) na Manchester United (2011–2015).
Net uru: £ 520,000 ruo £ 1 nde.
ụgwọ: £ 25,000 kwa izu (dịka ọ bụ na Machị 2020).